Ciidamada Dowladda oo ku dhawaaday goobta Ciidanka Jubbaland ku sugan yihiin | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Ciidamada Dowladda oo ku dhawaaday goobta Ciidanka Jubbaland ku sugan yihiin
Ciidamada Dowladda oo ku dhawaaday goobta Ciidanka Jubbaland ku sugan yihiin
Ciidamada Dowladda Somaliya ayaa hawlgal maanta ay ka sameeyeen Gobolka Gedo waxay ku taggeen, oo ay ku saldhig dhigteen xuduuda kala qaybisa Degmooyinka Beled Xaawo iyo Mandhera, oo ku yaala xuduuda Somaliya iyo Kenya.
Ciidamada Dowladda ayaa aad ugu dhawaaday goobta ay xuduuda kaga sugan yihiin Ciidanka Daraawiishta Jubbaland, taa oo baqdin ku keentay dadkii xuduuda deganaa, oo baqdin awgeed uga barakacaya guryahooda.
Daahir Aadan Maxamuud oo ka mid ah dhalinta ku dhaqan Degmada Beled Xaawo ayaa Dhacdo.com u sheegay in Ciidamada Dowladda la wareeegeen xaafadaha Dhabad, Xaashaawe iyo Immigration-ka, oo ku yaala xuduuda, soona xigga dhinaca Somaliya.
Daahir Aadan Maxamuud oo sawir ka bixinaya goobaha ay Ciidamada Dowladda la wareegeen iyo ujeedada ay xilligan u taggeen ayaa yiri “Meelaha ay Ciidanka Dowladda la wareegeen waa waddo dheer oo xuduuda ku taala, hadana waxay jooggaan dhulka xuduuda ee labada dal ay wadaagaan, gaar ahaan qaybta Somaliya ayay jooggaan, kuwii kale ee Jubbaland ayagana waxay ku sugan yihiin meesha la dhaho BIBI ONE, waa xuduuda dhinaca Kenya.”
Daahir Aadan ayaa xaqiijiyay in hawlgalka ay Ciidamada Dowladda kula wareegeen deegaanada xuduuda dhaca, ay baqdin ku abuurtay dadkii deegaanka, kuwaa oo bilaabay inay isaga barakacaan xuduuda.
“Marka la wareegitaanka Ciidanka Dowladda ee xuduuda waxay cabsi ku keentay dadka ku dhaqnaa Xaashaawe iyo Dhabad, maanta aad ayaa looga soo barakacay Xaashaawe. Dadka kale ee ku nool deegaanada xuduuda qaybta Kenya ayagana barakac ayay sameeyeen, dhanka Mandhera ayay u barakaceen. Labada dhinacba dadka waxay cabsi ka muujinayan in lagu dul dagaalamo.” Ayuu yiri Daahir Aadan.